चुनाव जित्नासाथ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दलबलसहित रसुवागढी नाका पुगेका थिए । त्यो हेलिकप्टर सयरमा देखिएको ओलीको राजनीतिक भावभंगिमाले दुइटा अर्थ बोकेको थियो । एक, प्रधानमन्त्रीको सिंहासन अब निसन्देह उनको भइसकेको छ ।
फरक धारका राजनीतिक अभ्यासबाट उदाएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले अनेक आशंका–अन्योल चिर्दै अन्तत: पार्टी एकता सुनिश्चित गरेका छन् । पार्टी एकता अभियान घोषणापछिको करिब पाँचमहिने कसरतले एमाले–माओवादी केन्द्र एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएको हो यद्यपि एकता घोषणा बाँकी छ ।
संघीय राज्यका सुरक्षा निकायको संगठनात्मक संरचना कस्तो हुने ? त्यसको कार्यसम्पादनलाई कसरी चुस्त र थप विकेन्द्रित बनाउने ? यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नमाथि न सुरक्षा निकायभित्र नत राजनीतिक तहमा गम्भीर छलफल भएको छ ।
देहात बस्ती र गाउँघरका सबै खाले मातृभाषी समुदायका अभिभावक छोराछोरी बोर्डिङ स्कुल पढाउन नगर र सहरतिर झरेको निकै वर्ष भइसकेको छ । प्रजातन्त्र उदयसँगै नागर सभ्यता र ग्राम परिवेशको सम्मिश्रणले आधामरो परिवेश सिर्जना हुनपुगेको छ ।
सबै विषय अपेक्षित ढंगले अघि बढे अधिकतम ५ वर्ष र अनपेक्षित गराइयो भने पनि न्यूनतम २ वर्षका लागि सरकारको स्थायित्वमा अब प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । सरदर वर्षमा दुईजना प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विगतलाई जनताले नयाँ जनादेशमार्फत तिरस्कार गरेका छन् र स्थिरता र विकासको नारालाई करिब दुई तिहाइ मतले अनुमोदन गरेका छन् ।
चीनले सिगात्से हुँदै केरुङ ल्याउने रेलमार्गलाई नेपाल भित्र्याउने विषय केही वर्षदेखि चर्चामा छ । दुई वर्षअघि नेपाल–चीनबीच भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताले रेलमार्ग विस्तारको सम्भावनालाई प्रबल बनाएको पनि हो ।
हरेक आमाको लागि आफ्नो नवजात शिशुसँग बिताएका पहिला दिनहरू सम्झनायोग्य हुने गर्छन् । यी दिनहरू आमाहरूका लागि चुनौतीपूर्ण त हुन्छन् नै, साथै सन्तोषजनक पनि हुन्छन् । मलाई सुत्न नपाएका अनेकन रातहरूको सम्झना अझै पनि छ ।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको दैनिक कार्यसम्पादनमा आउटसोर्सिङको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विश्व बजारमा यो व्यावसायिक सहयोगीका रूपमा स्थापित छ । लगानीकर्ताले आफ्नो समय, अनुभव र लगानी मुख्य व्यावसायिक क्रियाकलापमा खर्चिन आउटसोर्सिङलाई अंगिकार गरेको पाइन्छ ।
२०७१ सालमा नेकपा एमाले ताप्लेजुङले जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा रजत महोत्सव मनायो । महोत्सवका प्रमुख अतिथि थिए, माधवकुमार नेपाल । महोत्सव उद्घाटनमा जानुअघि सदरमुकाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पंक्तिकारले २५ वर्षसम्म जनताले लगातार नेतृत्व दिँदा तपाईंको पार्टीले के दियो भन्ने जिज्ञासामा नेपालले ‘ध्यानाकर्षण भएको छ’ मात्रै भने ।